ကမ်ဘာပျေါက အလှဆုံး မှိုတှရေဲ့ ပုံရိပျမြား - Thutazone
ကမ်ဘာပျေါက အလှဆုံး မှိုတှရေဲ့ ပုံရိပျမြား
ဒီတခါတော့ မှိုတှအေကွောငျး ဗဟုသုတအခကျြတခြို့ နဲ့ ကမ်ဘာ့အလှဆုံးမှိုတှရေဲ့ ပုံရိပျတှကေို မြှဝသှေားပါမယျ။
ကြှနျတျောတို့ Mushrooms လို့သိကွတဲ့ မှိုတှကေို toadstool လို့လညျးချေါကွပွီး မှိုဟာ Fungi ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျကွီးအောကျမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။ ဒီနရောမှာ စားနိုငျတဲ့မှုတှကေို Mushrooms လို့ရေးလရှေိ့ပွီး တောကျတတျတဲ့မှိုတှကေိုတော့ toadstool လို့ သုံးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။ မှိုမြိုးနှယျဝငျတှဖွေဈတဲ့ mold နဲ့ yeast တို့ကိုပါ ထညျ့တှကျမယျဆိုရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ မှိုမြိုးစိတျပေါငျးဟာ ၅၀၀၀၀ လောကျအထိ ရှိနိုငျတယျလို့ သိရပွီး ၂% ခနျ့ဟာ အဆိပျပွငျးထနျတဲ့ မှိုတှဖွေဈပါတယျ။
မှိုအမြားစုကို စိမျးလနျးတဲ့ သဈတော သဈအုပျတှထေဲမှာ တှရေ့လရှေိ့ပွီး တခြို့ကတော့ ရအေောကျမှာ ပေါကျနလေရှေိ့ပါတယျ။ မြိုအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီးတော့ ပုံသဏ်ဍာနျအရောငျ မြိုးစုံကှဲပွားကွပါတယျ။ လူတှဟော မှိုတှကေို စားသုံးရနျ နဲ့ ဆေးဝါးဖျောစပျခွငျးတှမှော အသုံးပွုသလို ဇီဝနညျးပညာဆိုငျရာ ပညာရပျတှမှောလညျး ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အသုံးပွုကွပါတယျ။
မှိုတှကေို လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက လူသားတှဟော စားသုံးခဲ့ကွပါတယျ။ ရှေးအီဂဈြဖာရိုဘုရငျတှဟော မှိုတှကေို တောငျဝငျအစားအစာအဖွဈတောငျ စားသုံးခဲ့ကွသလို ရောမလူမြိုးတှဟောလညျး အလှနျကွိုကျနှဈသကျပါသတဲ့။
သတျမှတျခကျြတှအေရဆိုရငျတော့ မှိုတှဟော Plant အပငျ ကဏ်ဍအောကျမှာ မပါဝငျပါဘူး။ မှိုတှရေဲ့ DNA တှဟော အပငျတှရေဲ့ DNA ထကျစာရငျ လူတှရေဲ့ DNA နဲ့တောငျ ပိုတူနတေယျ လို့ သိရပါတယျ။
မှိုအစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ ၉၀% လောကျဟာ ရနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားပွီး ပရိုတိနျးပါဝငျမှုမြားပွားတာကွောငျ့ သဈတောထဲကအသား Forest Meat လို့တောငျ တငျစားချေါဝျေါကွပါတယျ။ Laetiporus လိုမှိုအမြိုးအစားတှရေဲ့ အရသာဆို ကွကျသားအရသာနဲ့တောငျ ဆငျပါသတဲ့။
ကမ်ဘာပျေါမှာ လူသိအမြားဆုံး အစားသုံးဆုံးမှိုကတော့ မှိုဖွူ white button mushrooms ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ မှိုတငျပို့မှု အမြားဆုံးနိုငျငံကတော့ တရုတျနိုငျငံ ဖွဈပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာစုစုပေါငျးစားသုံးတဲ့ ပမာဏရဲ့ထကျဝကျလောကျအထိ စီးပှားဖွဈတငျပို့လကျြပါတယျ။
သဈတောတှထေဲမှာ မှိုတှရှောဖှစေုဆောငျးခွငျးကို mushrooming ဒါမှမဟုတျ mushroom hunting လို့ချေါပါတယျ။
အဆိပျရှိမှိုမြားကို စားမိတဲ့အခါ မူးဝခွေငျး၊ အော့အနျခွငျး ၊ ဓာတျလြှောခွငျး၊ တံတှေးမြားစှာထှကျခွငျး၊ ဆီးခြုပျခွငျး၊ မကျြလုံးဝလောခွငျးမြား ဖွဈပွီးလြှငျ ထိုငျးမှိုငျးခွငျး၊ ခြှေးထှကျခွငျးနှငျ့ နှလုံး သှေးအား နညျးခွငျး စသညျ့လက်ခဏာ မြားဖွဈတတျပွီး အမွနျဆုံးမကုသပါက အသကျအန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
မှိုတှဟော တနှဈပတျလုံး ပေါကျလရှေိ့ပွီး အမြားဆုံးတှရေ့လရှေိ့တာကတော့ ဆောငျးဦးရာသီမှာဖွဈပါတယျ။ တောရိုငျးမှိုအမြားစုကတော့ ဆောငျးဦးရာဦမှာပဲ ပေါကျလရှေိ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဈေးအကွီးဆုံးမှိုကတော့ white truffle လို့ချေါတဲ့ ရှားပါးမှိုဖွဈပွီး ဒီမှိုဟာ အလေးခြိနျ ၁ပေါငျကိုတောငျ ယူရို ၂၂၀၀ ခနျ့ကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ။ အရသာကောငျးလှနျတာကွောငျ့ ၁၈ရာစုက ဆိုရငျ ဒီမှိုကို မီးဖိုခြောငျရဲ့စိနျ လို့တောငျ တငျစားချေါဝျေါကွပါတယျ။
မှိုမြိုးစိတျပေါငျး ၇၅ မြိုးလောကျဟာ ညဘကျမှာ အလငျးရောငျကို ထုတျလှတျပေးနိုငျပါတယျ။ နဘေ့ကျမှာ သာမနျမှိုနဲ့ သိပျမထူးခွားတဲ့ ဒီမှိုမြိုးစိတျတှဟော ညဘကျမှာတော့ မီးအစိမျးရောငျထှနျးထားသလို တောကျပနလေရှေိ့ပါတယျ။
Armillaria ostoyae ဆိုတဲ့ မှိုတှကေိုတော့ တဆကျတညျးအမြားဆုံး ပေါကျနိုငျတဲ့ မှိုအဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံ Oregon ဒသေက Blue Mountains မှာ တဆကျတညျးပေါကျနတောဖွဈပွီး အကယျြအဝနျးအားဖွငျ့ စတုရနျးမိုငျ ၃.၅မိုငျခနျ့ရှိပွီး စုစုပေါငျး ခနျ့မှနျးအလေးခြိနျအားဖွငျ့ တနျခြိနျ ၃၅၀၀၀ လောကျအထိရှိတာကွောငျ့ သကျရှိတှထေဲမှာ အကွီးဆုံးအရာ the world’s most massive living organism အဖွဈ သတျမှတျထားခွငျး ခံထားရပါတယျ။
အောကျက ပုံတှကေတော့ ကမ်ဘာတလှားက အလှဆုံးဆိုတဲ့ မှိုမြိုးစိတျတှရေဲ့ ပုံရိပျတှဖွေဈပွီး Bored Panda ဝဘျဆိုဒျကနေ တဆငျ့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
14. Cyathus Striatus
15. Geastrum Minimum
16. Aseroe Rubra
17. Tiny Golden Mushrooms
19. Hairy Mycena
20. Amanita Muscaria
21. Cup Fungi
22. Laccaria Amethystina
23. Entoloma Hochstetteri
24. Lactarius Indigo
25. Mycena Viscidocruenta
26. Toothed Mushroom
27. Clavaria Zollingeri
28. Parasola Miser
30. Coprinus Cordisporus
32. Panellus stipticus
ကမ္ဘာပေါ်က အလှဆုံး မှိုတွေရဲ့ ပုံရိပ်များ
ဒီတခါတော့ မှိုတွေအကြောင်း ဗဟုသုတအချက်တချို့ နဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမှိုတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေသွားပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ Mushrooms လို့သိကြတဲ့ မှိုတွေကို toadstool လို့လည်းခေါ်ကြပြီး မှိုဟာ Fungi ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စားနိုင်တဲ့မှုတွေကို Mushrooms လို့ရေးလေ့ရှိပြီး တောက်တတ်တဲ့မှိုတွေကိုတော့ toadstool လို့ သုံးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မှိုမျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ mold နဲ့ yeast တို့ကိုပါ ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မှိုမျိုးစိတ်ပေါင်းဟာ ၅၀၀၀၀ လောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ သိရပြီး ၂% ခန့်ဟာ အဆိပ်ပြင်းထန်တဲ့ မှိုတွေဖြစ်ပါတယ်။
မှိုအများစုကို စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်တော သစ်အုပ်တွေထဲမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး တချို့ကတော့ ရေအောက်မှာ ပေါက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ မျိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပုံသဏ္ဍာန်အရောင် မျိုးစုံကွဲပြားကြပါတယ်။ လူတွေဟာ မှိုတွေကို စားသုံးရန် နဲ့ ဆေးဝါးဖော်စပ်ခြင်းတွေမှာ အသုံးပြုသလို ဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
မှိုတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူသားတွေဟာ စားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးအီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေဟာ မှိုတွေကို တောင်ဝင်အစားအစာအဖြစ်တောင် စားသုံးခဲ့ကြသလို ရောမလူမျိုးတွေဟာလည်း အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသတဲ့။
သတ်မှတ်ချက်တွေအရဆိုရင်တော့ မှိုတွေဟာ Plant အပင် ကဏ္ဍအောက်မှာ မပါဝင်ပါဘူး။ မှိုတွေရဲ့ DNA တွေဟာ အပင်တွေရဲ့ DNA ထက်စာရင် လူတွေရဲ့ DNA နဲ့တောင် ပိုတူနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။
မှိုအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ၉၀% လောက်ဟာ ရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပရိုတိန်းပါဝင်မှုများပြားတာကြောင့် သစ်တောထဲကအသား Forest Meat လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ Laetiporus လိုမှိုအမျိုးအစားတွေရဲ့ အရသာဆို ကြက်သားအရသာနဲ့တောင် ဆင်ပါသတဲ့။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသိအများဆုံး အစားသုံးဆုံးမှိုကတော့ မှိုဖြူ white button mushrooms ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မှိုတင်ပို့မှု အများဆုံးနိုင်ငံကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာစုစုပေါင်းစားသုံးတဲ့ ပမာဏရဲ့ထက်ဝက်လောက်အထိ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့လျက်ပါတယ်။
သစ်တောတွေထဲမှာ မှိုတွေရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းကို mushrooming ဒါမှမဟုတ် mushroom hunting လို့ခေါ်ပါတယ်။
အဆိပ်ရှိမှိုများကို စားမိတဲ့အခါ မူးဝေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း ၊ ဓာတ်လျှောခြင်း၊ တံတွေးများစွာထွက်ခြင်း၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးဝေလာခြင်းများ ဖြစ်ပြီးလျှင် ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့် နှလုံး သွေးအား နည်းခြင်း စသည့်လက္ခဏာ များဖြစ်တတ်ပြီး အမြန်ဆုံးမကုသပါက အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မှိုတွေဟာ တနှစ်ပတ်လုံး ပေါက်လေ့ရှိပြီး အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိတာကတော့ ဆောင်းဦးရာသီမှာဖြစ်ပါတယ်။ တောရိုင်းမှိုအများစုကတော့ ဆောင်းဦးရာဦမှာပဲ ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးမှိုကတော့ white truffle လို့ခေါ်တဲ့ ရှားပါးမှိုဖြစ်ပြီး ဒီမှိုဟာ အလေးချိန် ၁ပေါင်ကိုတောင် ယူရို ၂၂၀၀ ခန့်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကောင်းလွန်တာကြောင့် ၁၈ရာစုက ဆိုရင် ဒီမှိုကို မီးဖိုချောင်ရဲ့စိန် လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
မှိုမျိုးစိတ်ပေါင်း ၇၅ မျိုးလောက်ဟာ ညဘက်မှာ အလင်းရောင်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့ဘက်မှာ သာမန်မှိုနဲ့ သိပ်မထူးခြားတဲ့ ဒီမှိုမျိုးစိတ်တွေဟာ ညဘက်မှာတော့ မီးအစိမ်းရောင်ထွန်းထားသလို တောက်ပနေလေ့ရှိပါတယ်။
Armillaria ostoyae ဆိုတဲ့ မှိုတွေကိုတော့ တဆက်တည်းအများဆုံး ပေါက်နိုင်တဲ့ မှိုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Oregon ဒေသက Blue Mountains မှာ တဆက်တည်းပေါက်နေတာဖြစ်ပြီး အကျယ်အ၀န်းအားဖြင့် စတုရန်းမိုင် ၃.၅မိုင်ခန့်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းအလေးချိန်အားဖြင့် တန်ချိန် ၃၅၀၀၀ လောက်အထိရှိတာကြောင့် သက်ရှိတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးအရာ the world’s most massive living organism အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံထားရပါတယ်။